Vaovao - Fahalalana fototra momba ny doka famokarana vokatra PVC
Fahalalana fototra momba ny doka famokarana vokatra PVC
Olana izay tokony hojerena amin'ny fampifangaroana ireo fitaovana
Amin'ny dingan'ny resina PVC, tokony ampiana additives isan-karazany hanatsarana ny fahombiazan'ny PVC hahatratra ny filan'ny fanodinana sy ny fahombiazan'ny vokatra. Amin'ny famokarana mombamomba ny varavarana sy ny varavarankelin'ny plastika dia ilaina matetika ny manampy ny stabilizer amin'ny hafanana, ny fanovana fanodinana, ny mpanova ny fiantraikany, ny menaka manitra, ny fanamafisana ny jiro, ny mpameno ary ny loko. Na dia ny habetsaky ny additives nampiana dia 0,1% ka hatramin'ny 10% amin'ny resina PVC, dia tena zava-dehibe ny anjara andraikiny avy. Azo lazaina fa tsy misy amin'izy ireo ilaina, ary ny fanovana ny vola ampiana dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fikarakarana sy ny fanatanterahana ny vokatra farany. Lehibe. Noho izany, tsy ireo akora ireo ihany no tsy maintsy lanjalanjaina marina, fa ny fizotran'ny fampifangaroana ihany koa dia tsy maintsy afangaro tsara mba hahatratrarana ny fitovizan'ny fitaovana.
Ny fizotran'ny fanomanana ireo fitaovana vita amin'ny PVC dia ahitana ny famafana, ny fifangaroana mafana, ny fifangaroana mangatsiaka, ny fitaterana ary ny fitehirizana. Ireo fomba ireo dia misy ny fomba famokarana bitika amin'ny fametahana tanana sy ny fitaterana an-tanana ary ny fomba famokarana ambaratonga lehibe amin'ny fametahana automatique sy fitaterana mandeha ho azy. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny indostrian'ny fitrandrahana fitrandrahana PVC mafy ny fireneko dia niditra tao anatin'ny vanim-potoana fampandrosoana haingana. Mitohy mivelatra ny refin'ny orinasa. Ho an'ireo orinasa manana vokatra 10.000 taonina isan-taona, ny fampiasana akora namboarina ho an'ny fomba fanodinana fitaovana dia tsy afaka mamaly ny filan'ny famokarana betsaka intsony. Ny fomba mandeha ho azy dia nanjary fomba fanao mahazatra. Ny fomba mandeha ho azy amin'ny fanodinana fitaovana matetika dia mety amin'ny zavamaniry famokarana mombamomba ny matihanina miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra mihoatra ny 5000 taonina. Ny haavon'ny asa dia ambany, tsara ny tontolon'ny famokarana, ary azo sorohina ny lesoka ataon'ny olombelona, ​​saingy lehibe ny fampiasam-bola, avo ny vidin'ny fikolokoloana ny rafitra, sarotra ny fanadiovana ny rafitra ary tsy mety ny raikipohy Ny fiovana matetika, indrindra ny loko fiovana. Ireo orinasa manana fahaizan'ny famokarana latsaky ny 4.000 taonina dia matetika no mampiasa akora manual, fitaterana ary fampifangaroana. Ny olana lehibe indrindra amin'ny akora artifisialy dia ny hamafin'ny asa, ny loto amin'ny vovoka dia miforona ao anaty akora sy ny fifangaroana, saingy kely ny fampiasam-bola ary malefaka ny famokarana.
Ny automatisation d'exploitation material dia manondro ny rafitra batching mandeha ho azy voafehin'ny solosaina ho ny fotony, ampiarahina amin'ny alàlan'ny fampitana pneumatic, ary avy eo ampiarahina amin'ireo mixer mafana sy mangatsiaka mba hamolavolana ny famokarana sy ny fampifangaroana ny tsipika famokarana. Ity teknolojia ity dia nampidirina teto amin'ny firenentsika tamin'ny tapaky ny taona 1980 ary nampiharina tamina orinasa lehibe marobe. Ny tombony azo avy amin'ity haitao ity dia ny fametrahana marim-pototra avo lenta, ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta ary ny fihenan'ny loto, izay afaka mamaly ny filan'ny famokarana extrusion betsaka. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa sasany eto amin'ny firenentsika dia afaka mamokatra an'ity karazana rafitra fikirakira mandeha ho azy voafehin'ny solosaina ity.
Ireo akora no dingana voalohany amin'ny fampifangaroana. Ny lakilen'ny akora dia ny teny hoe "quasi". Amin'ny orinasa maoderina lehibe mamokatra profil plastika, ny ankamaroan'ny akora dia mampiasa rafitra mandanjalanja automatique mifehy ny solosaina. Ny fomba be mpampiasa indrindra dia ny fandrefesana. Araka ny fomba fandanjana samihafa, dia azo zaraina ho andiana lanjan'ny fitambarana, lanja lanja ary fandanjana mitohy ny fitaovam-pandehanana mikoriana. Ny fomba fandanjana batch-to-batch mavesatra dia tena mirindra amin'ny famahanana sy ny fomba fampifangaroana batch-to-batch ilaina amin'ny fizotran'ny fampifangaroana, ary mety indrindra amin'ny fampifangaroana ny PVC, noho izany dia ampiasaina bebe kokoa amin'ny famokarana PVC profiles